आजको पत्रपत्रीका बाट Archives - Page2of 151 -
चिनी मिल र सरकारविरुद्ध भोली माइतीघरमा उखु किसानले आन्दोलन गर्ने
काठमाडौं । चिनी मिलहरुबाट ५२ करोड भन्दा बढि बक्यौता लिन नसकेका उखु किसानहरुले भोली माइतीघरमा आन्दोलन गर्ने भएका छन् । चिनी मिलहरुले सरकारले दिएको निर्देशन समेत उल्लंघन गरी किसानहरुलाई बक्यौता नदिएपछि सर्लाहीका किसानहरु आन्दोलन गर्न काठमाडौं आइपुगेका हुन् । उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीको अगुवाईमा काठमाडौं आएका उनीह...
काठमाडाैं । सरकारले सहसचिव प्रेमनारायण कँडेललाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेकाे छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहसचिवमा कँडेललाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । सचिव बुढुवाका लागि सहसचिव कँडेलसहित निरु दाहाल र कृष्ण आचार्यको नाम मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस भएको थियो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन...
प्रचण्डले प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि नेकपाकाे विवाद समाधान हुन्छ : डा. राजन भट्टराई
काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले पार्टीभित्र देखिएको विवाद महाधिवेशनबाट छिनोफानो हुने बताएका छन् । रिपोटर्स क्लब नेपालद्वारा सोमबार काठमाडौंमा आयोजित साक्षात्कारमा डा. भट्टराईले पार्टीभित्र देखिएको विवाद सचिवालय, स्थायी समिति, केन्द्रीय कमिटी हुँदै महाधिवेशनबाट छिनोफानो हुने ब...
बारा। चेकजांचका क्रममा प्रहरीमाथि नै आक्रमण गर्न खोजेका हतियारधारी भारतीय नागरिकमाथि प्रहरीले गोली चलाएको छ । प्रहरीको गोली लागी भारतीय नागरिक बृजकिशोर कुशवाहा घाइते भएका छन् । कुशवाको पाखुरामा गोली लागेको छ । उनको साथबाट प्रहरीले पाँच राउण्ड गोलीसहित एउटा पेस्तोल बरामद गरेको छ । प्रहरीका अनुसार कुशवाहा लुटपाट ...
सरकारले दियाे सबै प्रकारका परीक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति
काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) का कारण स्थगित सबै किसिमका परीक्षा सञ्चालन गर्न दिने सरकारले निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरु पालना गरी परीक्षासम्वद्ध आयोग, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, बोर्ड, विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरुलाई सबै तह, विषय र प्रकृतिका परीक्षाहरु सैद्धातिक...
भारतमा काेराेना संक्रमितको संख्या ६७ लाख ५७ हजार नाघ्यो
एजेन्सी । भारतमा कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित भएकाहरुको संख्या साढे ६७ लाखभन्दा बढी पुगेको छ । सरकारी अधिकारीहरुले बुधबार दिएको जानकारी अनुसार भारतमा अहिलेसम्म ६७ लाख ५७ हजार १३१ जना कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित भएका छन् । कुल सङ्क्रमित मध्ये ७२ हजार ४९ जना पछिल्लो २४ घण्टामा थपिएको पनि अधिकारीहरुले जनाएका छन् । त्यसैगरी कु...
एजेन्सी । एसियाका दुई ठूला शक्ति राष्ट्रहरु सीमा विवादका कारण हिंसात्मक झडपमा उत्रिएपछि सेप्टेम्बरमा सुरुवातामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नयाँदिल्ली र बेइजिङबीच सीमा विवाद समाधानका लागि मध्यस्थता गर्न तयार भएको बताएका थिए । अर्को मुलुकको भूमि जबरजस्ती आफ्नो दाबी गर्ने चिनियाँ चाल नयाँ भने होइन । विगतमा पनि...
आज भाद्र २८ गते आइतवारको राशिफल
मेष मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) सामाजिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ । शैक्षिक कार्य अघि बढ्नेछ । कुटुम्बको साथ पाईनेछ । कार्य सम्पादनमा सहजतापनि हुनेछ । मिथुन मिथुन (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, हा) धार्मिक तथा समाजसेवामा मन लाग्नेछ । न्यायिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । शुभकार्यको चर्चा चल्नेछ । राज्यबाट स...
आज भाद्र १६ गते मंगलबारको राशिफल
मेष मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) कला, साहित्य तथा संगीतमा रुचि बढ्नेछ । न्यायिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । शुभ समाचार सुन्न पाइएला । नयाँ कार्यको थालनी हुनसक्छ । मिथुन मिथुन (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, हा) आदर्श ब्यक्तित्व सँगको सहकार्यले नयाँ अनुभव मिल्नेछ । सन्तान सुख मिल्नेछ । चुनौतीको सामना गर्नु...
काठमाडौं । नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणदर तीव्र रूपमा फैलिने क्रम बढेको छ । बिहीबार एकै दिन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै १ हजार १ सय ११ जना संक्रमित थपिएका छन् । योसँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या ३५ हजार ५ सय २९ पुगेको छ । अहिले देशका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा लागु गरिएको छ भने केही जिल्लामा आवतजावत बन्द गरिएको छ । सं...